कोरोना संक्रमणमा उछाल, एक सातामै थपिए १० हजार संक्रमित। - Malayakhabar
होम पेज फिचर कोरोना संक्रमणमा उछाल, एक सातामै थपिए १० हजार संक्रमित।
कोरोना संक्रमणमा उछाल, एक सातामै थपिए १० हजार संक्रमित।
A health worker dressed in protective gear usesaswab to collect sample fromaman foracoronavirus test at Kalimati vegetable market duringagovernment-imposed nationwide lockdown asapreventive measure against the spread of the COVID-19 coronavirus, in Kathmandu on May 14 2020. (Photo by PRAKASH MATHEMA / AFP)
[ डीबि शर्मा ]
काठमाडौं:= नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । पछिल्लो एक सातामा हरेक दिन संक्रमित हुनेको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको हो । बिहीबार मात्रै थप तीन हजार ५५३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १५ हजार ८१ जनाको नमुना परीक्षण गर्दा तीन हजार ५५३ जनामा संक्रमण देखिएको हो । जबकि बुधबार तीन हजार ७५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
बिहीबार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै एक हजार ९१६ संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा मात्र एक हजार ४४९ संक्रमित थपिएका छन् भने भक्तपुरमा १५० र ललितपुरमा ३१७ संक्रमित थपिएका हुन् । एक साताकै अवधिमा साढे १० हजार संक्रमित थपिएका छन् । पुस २२ गतेदेखि पुस २८ गतेसम्म कुल १० हजार ५८४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । पुस २२ गते ५४०, पुस २३ गते ९६८, पुस २४ गते ९४४, पुुस २५ गते एक हजार १६७, पुस २६ गते एक हजार ४४६, पुस २७ गते दुई हजार ४४४ तथा पुस २८ गते तीन हजार ७५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।
संक्रमित हुनेको संख्या दिनहुँ बढिरहँदा संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या भने कम छ । बिहीबार २७१ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । बुधबार २७८ जना संक्रमणमुक्त भएका थिए । संक्रमित थपिनेको संख्या दैनिक बढे पनि संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या कम भएका कारण सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । हाल देशभर १४ हजार ३४० जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संक्रमण बढे पनि गम्भीर बिरामी हुने र मृत्यु हुनेको संख्या भने न्यून छ ।
बिहीबार एकजना संक्रमितको ज्यान गएको छ । बुधबार भने दुईजना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका थिए । संक्रमण बढेसँगै सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ । विद्यालय माघ १५ गतेसम्मलाई बन्द गरिएको छ भने सभा, सम्मेलन र भिडभाड नगर्न भनेको छ । स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्न सरकारले निर्देशन नै जारी गरेको छ ।
करारका स्वास्थ्यकर्मीको म्याद थप्न र रिक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेको भन्दै जनशक्तिको व्यवस्थापन एवं म्याद थपका लागि अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालक केन्द्रले कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार गर्न स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कुनै पद रिक्त भएका तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै, करारमा भर्ना भएका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूको करार अवधि आवश्यकताअनुसार २०७८ माघ महिनादेखि बढीमा तीन महिनासम्म थप्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ ।
बिहीबार सचिवस्तरीय निर्णयबाट देशभरका शिक्षण अस्पताल, प्रतिष्ठान, अस्पतालहरू र प्रयोगशालाहरूलाई जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न निर्देशन गरिएको मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा. समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । गत साता बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लकडाउन नै समाधान हो भन्ने पक्षमा छैनौँ : स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले सरकार अनावश्यक लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार कीर्तिपुर अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले आवश्यक ठाउँ हेरेर मात्रै लकडाउन गरिने बताउनुभयो । विगतमा अन्य देशलाई हेरेर लकडाउन गरिएको स्मरण गर्दै मन्त्री खतिवडाले यसपटक त्यस्तो नगर्ने दोहोर्‍याउनुभयो ।
‘विश्वमा, युरोपेली देशहरूमा लकडाउन भनेको सुन्यौँ, यो नयाँ कुरा भयो, त्यसैअनुसार गर्‍यौँ । हामी पनि आतंकित भयौँ । गर्नुपर्ने बेलामा गरेनौँ, अघि पछि गर्‍यौँ,’ मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ‘अब हामी आत्तिएर, मात्तिएर लकडाउन नै समाधान हो भन्ने पक्षमा छैनौँ । आवश्यक्ता हेरेर खास ठाउँमा विचार पुर्‍याएर लकडाउन गर्नेछौँ । सजिलैसँग लकडाउनमा जाँदैनौँ ।’
यसअघिका लकडाउनले देशको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै असर गरेको भन्दै अब लकडाउन नै समाधान हो भन्ने किसिमबाट सरकार नजाने बताउनुभयो । मन्त्री खतिवडाले आउँदो माघ पहिलो हप्ताबाट अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई बुस्टर डोजको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री खतिवडाले कोरोनाको नयाँ भेरियन्टबाट बच्न होसियार रहनुपर्ने भन्दै मास्क र स्यानिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
अघिल्लो लेख ‘बलिउड ठूलो इन्डस्ट्रि भएकाले मार्क हुन कठिन हुन्छ’: विपिन कार्की।
पछिल्लो लेख सञ्जु र जुनुमायाको नयाँ कीर्तिमान।
कंगनालाई लिएर अन्सारीको विवादास्पद वयान।
मुम्बई:= जामताडाका कांग्रेस विधायक डा.इरफान अन्सारीले अभिनेत्री कंगना रनौतलाई लिएर विवादास्पद वयान दिनुभएको छ । कंगना रनौतको गालाभन्दा पनि जामताडाका सडक चिल्लो हुने उहाँको...